Nintendo Chinja yatomhanya neLinux pasina matambudziko, nekuda kwevavhavha | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mishoma yapfuura, iyo nyowani yemutambo weNintendo mutambo, Nintendo Chinja, yakaburitswa. Iyo 2-1 koni iyo yakachinja mutambo weconsole musika nekuda kwenzira dzayo dzekutamba ... uye software yayo. Iyo nyowani yeNintendo koni yatora nguva shoma kubiwa uye nekuda kwekushandisa kweiyo inoshanda system, tinogona kutaura izvozvo Nintendo Chinja inokwanisa kumhanya Gnu / Linux.
Boka revabati vanoona nezve iri basa rave FailOverflow, boka revabiridzi vakatokwanisa kubira mamwe mavhidhiyo enyaradzo seNintendo Wii kana PlayStation 4 pakati pevamwe. Uye zvakare yakagadzira yekumisikidza sisitimu inomiririra ramangwana kugadzirisa kubva kuNintendo kune software yayo.
Zviripachena kuti kushandisa kwacho kunonetsa kugadzirisa uye kuchaita kuti Linux isungike paNintendo Shandura izvozvi, kunyangwe paine Nintendo inogadziridza sezvo gomba iri richinetsa kubvisa neyakagadziriswa. Asi, chinokanganisa ndechekuti hazvizove nyore kune vashandisi vekupedzisira kuti vaite izvi, ndiko kuti, kuisa Gnu / Linux pane iyo Nintendo Chinja. Pakati pezvimwe zvinhu, FailOverflow haasati aburitsa gadziriso yekuvandudza izvozvi uye mifananidzo yacho inoratidza tambo izvo zvinogona kuratidza yakaoma uye ine ngozi maitiro evashandisi vekupedzisira.
Kusvika padanho rekuzevha nevazhinji venhau vanofunga kuti FailOverflow yakawana mhedzisiro nekutenda kuPhotohop uye nekunyepedzera kwemifananidzo. Iyi dzidziso, kunyangwe ichizivikanwa, zvakare zvakaoma kutenda nekuti kune rimwe divi haisi yekutanga koni yemutambo iyo boka revapambi uye nekune rimwe divi Nintendo yakasiya madhokonya akati wandei pazvinyaradzo zvayo zvinobvumidza Linux kuiswa, sezvazviri neNintendo Mini Classic kana Nintendo Wii. Saka zviri nyore kutenda kuti iyo Nintendo Shanduko yakabiwa. Ini pachangu ndinozvitenda uye ndinofunga izvo Uku kushandisa kwakakurumbira kune zvakawanda zvine chekuita neSoftware iri kushandiswa naNintendo pane chipukanana naNintendo programmers. Software ine zita rekuti «Libre» Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nintendo Chinja yatomhanya neLinux zvisina mhosva, nekuda kwevabiridzi
Iyo ingangoita yeFreeBSD bug (sisitimu iyo iyo switch yacho sezviri pachena yakavakirwa) iyo Nintendo yakakanganwa kubata ...
Kali Linux 2018.1 ikozvino yave kuwanikwa nekusiyana kwakasiyana kugadzirisa uye kugadzirisa